Toamasina: polisy inspektera iray very basy tamin’ny fomba tsy mazava | NewsMada
Toamasina: polisy inspektera iray very basy tamin’ny fomba tsy mazava
Very ny basy PA teny amin’ity polisy inspektera iray miasa amin’ ny biraon’ny tale iraisam-paritry ny filaminana anatiny ao Toamasina. Mifamahofaho be ihany, tsy mazava anefa ny antony nahavery ity fitaovam-piadiana ity. Mandeha ny famotorana.
Nafenimpenina ihany ny vaovao momba ity basy very ity raha ny fantatra. Ny fanangom-baovao amin’ ity raharaha ity, voalaza fa nahazo fandrahonana ny eo anivon’ny samy polisy izay minia mamoaka izany indrindra raha tonga eny anivon’ny mpanao gazety. Misy ihany anefa ny tsy manaiky izany satria iankinan’ny ain-dehiben’ny fiarahamonina ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana tonga eny am-pelatanan’ny jiolahy. Nilaza hatrany ny loharanom-baovao fa basy niainga avy tany amin’ny polisy Ste Marie izy io, raha mbola niasa tany an-toerana ilay inspektera nampiasa azy teo aloha. Tokony ho napetrany tany amin’ny magazain’ny basy izy io raha hifindra toerana hiasa eto izy. Tsy nanao izany anefa ilay polisy fa nentiny nanaraka azy tany Toamasina ilay basy.
“Efa nisy fotoana nilazan’ny lehibe taminy fa tokony hapetrany any amin’ny “magasin d’ arme” ilay basy ary voalaza fa hataony izany”, hoy ny fanazavana.
Vao roa herin’andro teo, nilaza tamin’ny lehibeny ilay inspektera fa misy polisy avy any
Ste Marie mitondra olona any amin’ny fitsarana tonga any Toamasina ka tokony hampitondraina miverina ilay basy. Nalaina tokoa ny basy tao amin’ny fitoerany fa hoe omena ireo polisy avy any Ste Marie mba haverina any.
Amin’ izao fotona anefa, tsy tonga any amin’ny tokony hiverenany ilay basy fa voalaza fa very.
Mizara roa ny fanazavana izay mifamahofaho tanteraka. Misy ny milaza fa narian’ilay inspektera tany amin’ny trano fisotroana ilay basy. “Mamo izy ary efa tonga tany an-trano izy vao niverina nitady ilay basy fa tsy hita intsony tao amin’ ilay trano fivarotana toaka”, hoy ny fanazavana. Ny loharanom-baovao hafa, nilaza fa nambaran’’ilay inspektera fa very tao amin’ny biraony ilay basy.
Manoloana ity tranga ity, miandry fanadihadiana ny rehetra momba ity fahaverezana basy ity. Ny toy izao no anisan’ny manaparitaka ny basy eny am-pelatanan’ny jiolahy. Ny hany azo ambara aloha, amin’ny raharaha tahaka izao, sazy henjana ny tokony ho azon’ny mpitandro filaminana manary basy ary mahavoaroaka amin’ny asa mihitsy.
Manaporofo koa itony tranga itony fa mety misy ny firaisana tsikombakomba amin’ny olon-dratsy amin’izao. Tsy zavatra bitika ny basy mantsy ka ho very amin’ny tandrevaka fotsiny izao. Mitombo iray indray izany ny basy any am-pelatanan’ny jiolahy.